အောင်မြင်သောခင်ပွန်းနောက်ကွယ်က ဇနီး (သို့) အောင်မြင်သောဇနီးသည်နောက်ကွယ်က ခင်ပွန်း - ONE DAILY MEDIA
အောင်မြင်သောခင်ပွန်းနောက်ကွယ်က ဇနီး (သို့)
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘာအတွက် အိမ်ထောင်ပြကြပါသလဲ ?? မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဘဝလက်တွဲဖော် ရွေးချယ်မှုဟာ သင့်ဘဝကိုအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့တော့ လိုပါတယ် ။ ဥပမာအားဖြင့် အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘားရတ်အိုဘားမား ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာ သူ့ဇနီးသည်အတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ ။ သိပ္ပံပညာမှာလဲ ထိုအယူအဆ မှန်ကန်ကြောင်း ရှင်းပြထားပါသေးတယ်။
“အောင်မြင်သော‌အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ရှိတယ် ” ဆိုတဲ့စကားစုလေးကို အားလုံးကြားဖူးမှာပါ။သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာမှုများအရလဲ ထိုစကားမှန်ကန်ကြောင်းကို ထောက်ခံမှုတွေ ရှိထားပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုဟာ ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေခြင်း ရှိမရှိကို မကြာခဏဆိုသလို သံသယဝင်မိတတ်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Carnegie Mellon University ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိမှုများအရ လက်တွဲဖော်ရွေးချယ်မှုဟာ ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက် ကြီးမားသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။
စုံတွဲပေါင်း (၁၆၃) တွဲပါဝင်ခဲ့သော အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်မှာ ဉာဏ်စမ်းပုစ္ဆာများ ၊ ရင်ခုန်စရာစိန်ခေါ်မှုများ ၊ ပြိုင်ပွဲများ အနိုင်ရရန်ကြိုးစားမှုများကို အတူတကွ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သုတေသနပြုလုပ်သူများက အဆိုပါပုစ္ဆာတစ်ခုစီတိုင်းအတွက် စုံတွဲများ၏ အပြန်အလှန်အကြံပေးခြင်းများ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမချမှီ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ ၊အပြန်အလှန်အားပေးထောက်ခံမှုများ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုထားပေးခြင်းများ
ရှိခြင်း မရှိခြင်းများ နဲ့ အောင်မြင်မှုများကို မှတ်တမ်းရယူထားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ၆ လကြာပီးနောက်မှာတော့ အတူတကွ အားပေး တိုင်ပင်ဖြေရှင်းခဲ့ကြသော စုံတွဲများနှင့် ထို့ကဲ့သို့မဟုတ်ပဲ သီးသန့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသော စုံတွဲများ၏ သက်ဆိုင်ရာ လူနေမှုဘဝ တိုးတက်မှု အခြေအနေများကိုလည်း ရှာဖွေ့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
(၂) အရေးပါတဲ့ လက်တွေ့ကျမှု
Washington University in St. Louis မှာရှိတဲ့သုတေသနပညာရှင်များကလည်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ်တွင်သာမက လက်တွဲဖော်နှင့်လည်း သက်ဆိုင်ကြောင်း ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ လက်တွဲဖော်အ‌ပေါ် လက်တွေ့ကျကျ သိနားလည်ပေးနိုင်မှု ဟာ အောင်မြင်မှုရဲ့ သော့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Celebritiesတွေ ပိုသိပါလိမ့်မယ်
လက်တွဲဖော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အလွန်အရေးပါကြောင်း ထုတ်ဖော်ဝန်ခံထားတဲ့ နာမည်ကြီး Celebrity များစွာလည်း ရှိနေပါတယ်။ (၂၀၁၇) ခုနှစ်မှာ ဖေ့စ်ဘွတ်တည်ထောင်သူ Mark Zuckerberg က သူ၏အမျိုးသမီးဖြစ်သူ Priscilla က သူရဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဘဝအောင်မြင်မှုများအတွက် အရေးပါဆုံး တွန်းအားပေးခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားပြီး အသိအမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တကယ်မှာတော့ အထောက်အပံ့ကောင်း ဇနီးသည်တင်သာမက ခင်ပွန်းသည်များလည်း ရှိပါတယ်။ ဂရမ်မီဆုရှင် ဘီယွန်းဆေးက သူမရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ သူမခင်ပွန်းသည်အကြောင်းကို ” ကျွန်မအတွက် အဖက်ဖက်က ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ် တစ်ခုပါ ။ ဒီခင်ပွန်းသည်မရှိပဲ ကျွန်မဆိုတာလဲ မဖြစ်လာနိုင်ပါဘူး ” လို့ ထုတ်ဖော်ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တကယ်ရော ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘဝကို တစ်ယောက်တည်းရင်ဆိုင်ခြင်းထက် လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်နှင့်အတူ ရင်ဆိုင်ရသည်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်စေမယ်လို့ ထင်မိပါသလား ???